Malunga Nathi - HeBei ShaoBo Photovoltaic Technology Co., Ltd.
Iinkampani ze-ShaoBo ezinezinga eliphezulu loxanduva lwentlalo kunye nesikhundla esihamba phambili kwintsimi yamandla avuselelekayo, zizimisele ukubonelela ngokuzinza kwamandla acocekileyo kuluntu, ukwakha indawo yokuhlala ecocekileyo kunye nekamva elingcono.
HeBei ShaoBo Photovoltaic Technology Co., Ltd. Yasekwa ngoJulayi 2014, kwiPhondo Hebei kwimodyuli yomzi-mveliso Solar ibekwe No. 88, Gaoning Line, Guchengdian Town, Baixiang County, malunga 60 km kude Shijiazhuang City, kufutshane S393 wephondo wendlela, i uthutho lufanelekile. Umzi-mveliso uhlanganisa indawo ye-30000 square metres, indawo yokwakha ye-21000 square metres, inomgca wokuvelisa imodyuli emihlanu yelanga, iimveliso eziphambili ziyimodyuli yelanga ye-monocrystalline kunye ne-polycrystalline, inokwanelisa iimfuno ezahlukeneyo zabathengi. Ubungakanani bentengiso bujikeleze i-800-1000MW minyaka le.
Ekuqaleni kwenkampani ukusuka kwi-2014, sele ibambelele kwi-"innovation of science and technology as the forerunner, thatha iimveliso zodidi lokuqala, inkonzo ekumgangatho ophezulu njengesikhokelo, uqhubeke nokuphucula njengoko kuyalelwa" izikhokelo, ngokusekelwe itekhnoloji ephezulu, nikela ingqalelo kumgangatho wemveliso kunye nenkonzo, kwaye uphucule rhoqo ukukhuphisana kwakho, ngophuhliso lwendawo echanekileyo kunye nokusebenza okuqinileyo kwemveliso, hlala kwindawo ephezulu kushishino.
Sibambelela kwimilinganiselo ethi "integrity innovation, ukubambelela kwifilosofi, umsebenzi weqela", sizame konke okusemandleni ethu ukubonelela ngeemveliso zelanga ezikumgangatho ophezulu kunye nobuchwepheshe, ukubonelela ngamandla elanga kumntu ngamnye kunye nokukhusela umhlaba oluhlaza, ukuze intsapho nganye unokuhlala uwonwabela amandla elanga kwaye wakhe indawo yokuhlala ecocekileyo.
Iqela lolawulo elinamava
Iqela labachwephesha abanamava lenze iqela lolawulo elisebenza kakuhle kakhulu, likhuthaza ngokukhutheleyo inkampani kwimarike yehlabathi, lijolise kuphuhliso lwexesha elide lwamandla elanga elanga, yenza iimveliso ze-photovoltaic ze-ShaoBo zisetyenziswa kakhulu kwihlabathi.